संगीतमा हरि, हरिको जीवनमा संगीतMain Samachar
२१ चैत्र २०७७, शनिबार १०:१० प्रकाशित
काठमाडौं । तिमीसँग जे छ त्यही प्रयोग गर। अनि बाँच आफ्नो जिन्दगी। कर्मले बाँचेका हस्तीहरूको जीवनको सार नै यही हो । आफूसँग भएको क्षमता नदेखेर आफ्नो जिन्दगीलाई पानीको फोकासँग तुलना गर्नेको कमी छैन।
जसले आफूलाई चिनेर अगाडि बढेको उसले समाजको चौघेरो भन्दा पर पनि आफ्नो अस्तित्व कायम राखेको छ। हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै क्षेत्रमा क्षमतावान हुन्छ। उसले अवसर प्राप्त गर्न कति प्रयास गर्छ भन्ने हो। संगीतकार तथा गायक हरि लम्साल यति बेलाका चर्चीत र व्यस्त सर्जक मध्ये एक हुन्। बिहिबार उनको स्टुडियोमा पुग्दा उनी केही गीतको रेकर्डीङमा व्यस्त थिए।
कुनै बेला नारायण गोपाल, भक्तराजका गीत सुन्दा होस् या गोपाल योञ्जन, नातिकाजीको संगीत सुन्दा उनी रोमाञ्चित हुन्थे। उनलाई लागिरहन्थ्यो, ‘कसरी निर्माण हुन्छ यस्तो क्षमता?’
समयको क्रमसँगै अहिलेका युवाहरू लम्सालका गीत सुन्दा ‘कास म पनि लम्साल जस्तै हुन् पाए’ सोच्दा हुन्। नत्र उनले संगीत गरेका एक से एक गीत हिटको सुचीमा किन पर्छन होला त? युवापुस्ता देखि वृद्धसम्म उनका प्रशंसकहरू प्रशस्त छन्।
‘पानीको फोका जस्तै छुट्यो हाम्रो माया’ होस् या ‘नजाऊ टाढा तिमीलाई’ होस्, ‘पर्दा पछाडि’ गीत/गजल, सम्म आइपुग्दा उनले छुट्टै पहिचान बनाइसकेका छन्।
अलिकति तिम्रो गल्ती भो अलिकति मेरो गल्ति भो
अलिकति नजर लाग्यो दुनियाँको
यो पहिचान बनाउन उनले गरेको प्रयास कम रोचक छैन। रेकर्डिङको काम सकेपछि उनले विगतको आफ्नो संगीत यात्राको कहानी सुनाउन तयार भए। उनले जीवनको यात्रा यसरी सुनाए, मानौं यो उनको जीवन होइन् एक काल्पनिक कथा हो। तर, संगीत र स्वर जस्तै उनको अभिव्यक्ति शैलीपनि प्रभाव पार्ने शैलीको जो छ।
अनि घर छोडेँ…
कहानी ठिक २० वर्ष अगाडि वि.स २०५६ बाट सुरु हुन्छ। जतिबेला काठमाडौं उनका लागि नयाँ शहर थियो। यही शहरसँग उनले पैठाजोरी खेल्न तयार थिए। नवलपरासीबाट उनी माघको अन्तिम साता काठमाडौं आएका थिए। उनीसँग त्यसबेला के थियो? दाईले किनिदिएको साइकल अंकित मूल्य भन्दा कममा बेचेर प्राप्त गरेको १६ सय। ‘दैनिकी काम गर्न दाजुले २६ सय हालेर साइकल किनिदिनु भएको थियो। मसँग काठमाडौं आउनका लागि पैसाको जरुरी थियो। १६ सयमा साइकल बेचिदिएँ’, उनी सुनाउँछन्, ‘छेउमा अडेस लागेको साइकलले मलाई बेच। अनी आफ्नो सपनाको उडान भर। तेरो सपना पूरा हुन्छ भने म बेचिन तयार छु। साइकलको आवाज हुन्थ्यो भने यहि भनेर सहमति जनाउथ्यो होला।’
त्यसबेला उनका बुबा बिरामी थिए। बिरामी बुबाको हेरचाह गर्नुपर्ने जिम्मा उनको पर्‍यो। तर, उनीमा संगीतको भुत सवार थियो। केन्द्रिकृत विकासले सपना पुरा गर्न शहर एक मात्र विकल्प थियो। नेपालीका लागि अवसर भनेको काठमाडौं नै त हो। उनले घरमा कन्भिन्स गराउन खोजे। उनी असल छोरो हुन चाहन्थे।
परिवारको सहमती मै काठमाडौं आउन चाहेका पनि हुन्। घरले सहमती दिएन्। अब उनी केहि समयको लागि कम्तिमा परिवार, आफन्त र छर छिमेको नजरमा खराब छोराको उपमा पाउने भए। किनभने परिवारको सहमति बेगर उनी काठमाडौं भाग्ने निर्णय गरे। ‘सपना पुरा गर्ने पागलवन्ति यति धेरै थियो कि मैले घरबाट भाग्नुपर्ने भयो। अन्तत १७ वर्षको उमेरमा काठमाडौको लागि रात्रीबस चढेँ’, थोरै उत्साहित र बुबा बिरामी हुदैँ घर छोडेको अवसोच मिसाएर २० वर्षअघिको घटना सुनाउँछन् उनी।
आफूलाई माया गर्ने परिवार र समाज छोडेर फरक शहरमा आए। बसपार्कमा गाडीले झारिदियो। गोजीमा केही पैसा थियो। तर, जाने कहाँ थाहा थिएन। उनलाई यति थाहा थियो, ‘म संगीत क्षेत्रमा केही गर्न आएको हुँ।’
नजाउ टाढा तिमीलाई मेरो माया भयो झन् गाढा
मेरो आँखामा तिमीलाई नै, मेरो मनमा तिमीलाई नै….
यो शहरमा चिनेका केही आफन्त थिए। उनीहरूको घरमा जादाँ पुन: घर फर्किनुपर्ने बाध्यता पनि थियो। उनले यो जोखिम लिन चाहेनन्। उनले पत्रिकामा बागबजारस्थित सरगम कला केन्द्रको विज्ञापन देखेका थिए। उनी सोझै त्यसैतर्फ लागे। काठमाडौं आएकै दिन उनी भर्ना भए। बसपार्क फर्के।
बसपार्कमा भेटिएका ति अपरिचित जो आफ्ना भए…
त्यो दिन जसोतसो बित्यो। बाँकी रकम सकियो। अनि सुरु भयो कहालीलाग्दा दिन। तर, उनले आफ्ना आउदाँ दिनबारे पहिल्यै आँकलन गरिसकेका थिए। अब भोग्न बाँकी थियो। भोलिपल्ट उनी क्लास गए। साथीहरूसँग चिना परिचित भए। पुन: बसपार्क आए। गोजी रित्तिसकेको थियो। पेट भोको थियो। चिसो हिउँदको रात खुला आकाशमुनि बिताउनु पर्ने भयो।
यहाँनेर एक घटना घट्छ। जसले लम्साललाई केहि दिन भएपनि राहत हुन्छ। भइदियो के भने सरगममा भेटिएका राजेश विक नामका एक साथीले उनलाई केही दिन आफ्नो कोठामा लगेर पनि राखे। लम्साल सुनाउँछन्, ‘यदि तपाई रित्तो हुनुहुन्छ भने तपाइको दुखमा सहयोगी हात जुन उठ्छ। त्यो जीवनको महत्वपूर्ण मान्छे हुन्छ। तिनले गरेको सहयोग जिन्दगीभरका लागि अमिट छाप बनेर बसिरहेको हुन्छ।’
केही दिन विकको कोठामा बसेर उनी पुन बसपार्कमा फर्के। देशका विभिन्न स्थानमा जाने मान्छेको भिड। बसको ताँती र वरीपरी बज्ने गीत। उनले त्यो माहोल हेर्थे। मजा मान्थे। त्यहाँ बज्ने गीत सुन्थे। रोमाञ्चित बन्थे। ‘केहि वर्ष पख। यहाँ मेरा गीत पनि बज्छन्’,उनी यस्तै कल्पनाको उडान भर्थे।
भनिन्छ,’अभावले बाँच्न सिकाउँछ। बोल्न सिकाउँछ। जो कसैसँग पनि सहज हुन सिकाउँछ।’ उनले पनि यहीँ कुरालाई मुख्य अस्त्र बनाए। उनी सुनाउँछन्, ‘बिहानीपख बसपार्कमा कैलालीबाट आएका वासुदेव मैनालीलाई मैले बोलाएँ। आफ्नो व्यथा सुनाएँ। केही गीत सुनाएँ। मैनाली पनि संगीतकोझ पारखी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ पनि काम र संगीत सिक्ने चाहले काठमाडौं आउनु भएको रहेछ।’
केही छिनको परिचय वर्षौंदेखिको मित्रता जस्तो बनाइदियो। मैनालीले दिदीकहाँ लगे। भोको पेटको उपचार भयो। फेरि उनी खुला आकाशमा बास बस्न आइपुगे बसपार्क।
त्यसपछि फेरियो दैनिकी….
काठमाडौं आएको एक महिना पश्चात् भने विस्तारै घरको याद सुरु भयो। घर फोन गरे। डरैडरमा उनले घर फोन गरे। अनुमति बिना घर छोडेर हिडेका उनलाई बुबाले माफी दिए। बुबाबाट दिदी-भिनाजुकोमा जाने अनुमति पाए।
दिदीकोमा गएपछि दैनिकी केही परिवर्तन भयो। सरगममा क्लास लिएका उनी गन्धर्व संगीत विद्यालयमा चन्दनकुमार श्रेष्ठकहाँ पुगे।उनी सुनाउँछन्, ‘चण्डीप्रसाद काफ्लेको सल्लाहमा मैले सिक्ने ठाउँ परिवर्तन गरेर संगीत सिक्न सुरु गरेँ।’
भाइको सपना देखेर बुटवलमा रहेका दाई काठमाडौं आए। बागबजारमा कोठा खोजिदिए। दिलबहादुर रोक्कासँग उनले कोठा साझेदारी गरे।
जीवनमा असल कामको सुरुवात गर्न गार्हो छ। सुरु भएपछि साथ दिने मान्छेहरूको कमि हुँदैन। यो भनाइ लम्सालसँग मेल खान्छ। उनको शोखलाई परिवारले पनि साथ दियो। उनले रफ्तारमा संगीत सिक्ने थाले। छ महिनापछि उनी रोक्कासँग बिदावारी भए। अनी तबलावादन सिक्न लागिपरेका देव गौतम उनीसँग बस्न थाले। उनको गौतमसँग दुई वर्षको बसाइ रह्यो।
घाँटीमा समस्याले थपिएको पिडा
हरेक व्यक्ति सोचे जस्तो जिन्दगी हुँदैन। जब जिन्दगीको कुनै मोडले भारी मात्रामा तनाव दिन सुरु गर्छ। लम्सालको पनि जीवनमा नसोचेको कहाँनी सुरू भयो। संगीत सिकाइका क्रममा उनको घाँटीमा समस्या सुरु भयो। उनी भन्छन्, ‘ चौध/प्रन्ध घण्टा अभ्यासको असर मेरो घाँटीमा देखा पर्‍यो।’ डाक्टरले ‘अब तपाईं मौन बस्नुपर्छ नत्र जे पनि हुनसक्छ’ भनेपछि तनाव र पीडा एकै पटक आइपरेको उनी सुनाउँछन्।
‘बुबा आमा आफन्त छोडेर आउँदा पनि मनमा त्यति पीडा भएको थिएन्। जति पिडा गाउन मिल्दैन भन्दा भएको थियो’, उनी भन्छन्, ‘ बाँसुरी र हार्मोनियमलाई सुम्सुयाएर बस्नुको विकल्प रहेन्। छ महिना मेरा लागि यति धेरै सकसपूर्ण रहे कि मेरो जिन्दगीको सुनौलो मौकाको अवसान भयो भन्ने लागेको थियो। ‘
उनले त्यो बिचमा योगा गरे। मोटिभेसनल स्पिच सुने। घाँटीको सफल उपचार गर्न सफल भएर संगीतको दुनियाँमा पुन फर्किए।
संगीत सिकाई र पुनेको यात्रा…
संगीत सिकाइ र काठमाडौंमा बस्न उनले गन्धर्व संगीत विद्यालयमा काम गर्न थाले। संगीतमो लगावले एक दिन तीर्थराज बस्ताकोटी उनको मा एउटा गीत बोकेर आए। आफ्नो क्षमता र सिप उनले त्यो गीतमा लगाए। बस्ताकोटीले मन पराए। पहिलो गीत सुरेश अधिकारीले गाउने भए। त्यसलगत्तै उनी २०५९ सालतिर संगीतको विस्तृत ज्ञानका लागि घरको सहमतिमा इन्ष्टिच्युट अफ मोडर्न म्युजिक सिक्न भारतको पुनेस्थित गुरु सुवासचन्द्र कुलकर्णीकहाँ पुगे। तीन वर्षे सिकाइ सकेर उनी काठमाडौं फर्किए।
तीन वर्षको अध्ययन पश्चात् उनी गन्धर्व संगीतमा आइपुगे। त्यहाँ उनले श्रीकृष्ण बम मल्ललाई भेटे। दुई जनाको मित्रता नयाँ रुप लियो। मल्लले उनलाई केही गीत दिए। उनले संगीत दिए। गायक माधव भण्डारीले आधुनिक गीत एल्बम गर्ने बनाए। रियाज म्युजिकको लगानीमा लम्सालको संगीत, मल्लको शब्द र भण्डारीको आवाजमा वि. सं. २०६३ मा पहिलो एल्बम ‘प्रवेश’ बजारमा आयो।
पहिलो एल्बम बजारमा आयो। उनको संगीतलाई लिएर चर्चा सुरु भयो। लम्सालले कृष्ण केसीको शब्दमा सुरेश अधिकारीका चारवटा र लम्सालका चारवटा संगीतमा ‘आफ्नो मन’ भन्ने दोस्रो एल्बम वि. सं. २०६४ मा बजारमा ल्याए।
‘आफ्नो मन’ श्रोताले अत्यधिक रुचाइदिए। उनले संगीत गरेको ‘पानीको फोका जस्तै’ गीतबाट उनको उचाई थप मजबुत बन्यो।
उनले संगीतको अलवा गाउन पनि थाले। उनका स्वरमा केही गीत पनि रेकर्डेड छन्। नीरा शर्माको ‘बा’ कवितालाई उनले स्वर र संगीत दिएका छन्। उनी भन्छन्, ‘यो मेरो लागि नयाँ प्रयोग थियो। कवितालाई कुनै शब्द तलमाथि नगरीकन संगीत भरेको थिएँ। दर्शकले मन पराइदिनुभयो।’ उनले हालसम्म दुई दर्जन एकल एल्बम, झन्डै दुई दर्जन चलचित्रमा संगीत गरेर लगभग १६ सय हाराहारी गीतमा संगीत भरेका छन्।
मोनो रेलझैँ चलिरहे
जिन्दगीभर कुदिरहे, कुदिरहे
त्यसैले त अग्लिँदै छ एक्लोपनको हिमाल
बसपार्कसँग लम्सालको सम्बन्ध आज पनि उस्तै छ। अहिले उनको दैनिकी गीतमा संगीत भर्ने मै बित्छ। कहिलेकाहीँ तनाव हुदाँ उनी आफ्ना पुराना दिन सम्झन्छन्। पहिलो पटक काठमाडौं आउँदा बसपार्कमा गीत सुन्दा केहि वर्षपछि मेरा पनि गीत बज्छन् भन्ने कल्पना गर्ने लम्साल कहिलेकाहीँ बसपार्क जान्छन् होला? पंक्तिकारले अनायासै त्यो कुरा निकाल्यो। उनी मखलेल पारामा जवाफ दिन्छन्, ‘मलाई बसपार्क आजपनि आफ्नै जस्तो लाग्छ। त्यहाँ पुग्दा पुराना दिन ताजा बनेर आउँछ। बसपार्कले ओ हरि! मलाई भुलेको त छैनस नि? भने जस्तो लागिरहन्छ।’
त्यो बसपार्कको माहोल, गाडीको कोलाहल, मान्छेको भिड, बज्ने गीत सबै उस्तैछन्। मात्र ति गीतमा लम्सालले संगीत भरेका गीत भने थपिएका छन्।